China True Wireless Active Noise Kudzima Earbuds Manufacture uye Fekitori |Roman
Nguva yeMumhanzi: inenge 5.6H
Nguva yekutaura: inenge 3.6H
Nguva Yakamira: 95H
Kuchaja bhokisi bhatiri: 300mAh, headset bhatiri: 60mAh
BT8922E chipset uye Bluetooth 5.0 kuti uwane kukurumidza kutapurirana uye kuderera kushandiswa.
Dual Master Earbuds Seamless Connection] Iyo ichangobva kuvandudzwa Tech inofambisa ruzha kuruboshwe nekurudyi panguva imwe chete, hapasisina relay ruzha kubva kune imwe nzeve kuenda kune imwe.Chinja modhi pakati pestereo nemono pasina kumbomira.Iyo mbiri dhizaini dhizaini inosimudzira kubatana kweBluetooth, inounza iwe yakavimbika yechokwadi isina waya ruzivo.
Yepamberi ANC Tekinoroji: Indasitiri-inotungamira Feed-Forward Active Noise Cancellation tekinoroji kubva iyo inokupa iwe rusununguko rwechokwadi kubva kune ruzha rwekumashure nemhando yepamusoro yekuteerera.
Ergonomic & Customizable: Inokodzera neKubata Kudzora] dyplay earbuds inotora yakatsetseka ndangariro foam cushioned nzeve pads kuti ikwane munzeve, kuve nechokwadi chekupedzisira-kunyaradza uye chepamusoro ruzha rwekuzviparadzanisa nevamwe pakurovedza muviri, mitambo uye kumhanya nekupfeka kwemazuva ese.
Nekungobata chigunwe, unogona kuzvishandisa kumisa iyo ANC, ridza / kumbomira mimhanzi, kugamuchira / kupedza mafoni.
Superior Ruzha Hunhu: Φ13mm hombe graphene diaphragm inoburitsa yakadzika uye punchy bass ine yakapfuma ruzivo rweruzha rwakachengetwa, izvo zvinoita kuti TWS isiyaniswe kubva kune vamwe.
pfupi, minimalist dhizaini mutauro yakakwenenzvera nzeve tsvimbo dhizaini yakatsetseka uye yakasikwa.
Super Capacity Yakareba Battery Hupenyu (60mAh single earphone,300mAh Kuchaja bhokisi rekuchengetedza).
25DB yeActive Noise Cancellation.
1. KUDZIMA/KUBATIDZA:Bvisa mahedhifoni kubva pakuchaja kesi[Vhura]/Dzorera mahedhifoni kukesi yekuchaja[OFF] Mahedhifoni anodzima otomatiki kana asina kupetwa mukati me3min.(Cherechedza: Kana mahedhifoni ari mukuita ruzha , vacharamba vachishanda kusvika bhatiri rapera.).
2. Pairing: Vhura kesi yekuchaja uye bvisa mahedhifoni, tsvuku / bhuruu mwenje mwenje, mahedhifoni anogona kusechwa.Vhura iyo bluetooth mumidziyo(eg.cellphone) kutsvaga nekubatanidza.Ne "beep" kana yakabatana zvinobudirira.
3. Pindura kufona: bata headset "L" kana "R" ka2 kuti upindure kufona.Ne "beep".
4. Dimbura runhare(Usaramba):bata mahedhifoni "L" kana"R" ka2 kuti udimbure runhare.Ne "beep".
5. Mumhanzi Kuridza / Kumbomira: bata musoro "L" kana "R" 2 nguva kutamba kana kumbomira.
6. Noise cancelling mode/Transparent mode:Dzvanya kwenguva refu mahedhifoni "L" kana "R" 2seconds kuti uchinje maitiro.
Zvakapfuura: Chokwadi Wireless Earbuds ane Hollow Metallic Kuchaja Case, Yakaderera Latency
Zvinotevera: TWS Earbuds ine yakaderera latency
Active Noise Kudzima Wireless Earbuds
Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds, Bluetooth Mono Headset, Munzeve Earphone, Noise Kanzura Earbuds, Bluetooth Headset Ine Mic, Wireless Bluetooth Earphone,